संरक्षण एउटा उद्देश्य लिएको फिल्म हो : स्वेता साह
निर्मात्री तथा नायिका
० तपाइँ संरक्षणको निर्माता पनि हुनुहुन्छ र अभियन पनि गर्नु भएको छ, चलचित्रको निर्माण गर्नु र अभिनय गर्नुमा तपाईले के–कस्तो भिन्नता पाउनु भयो ?
— निर्माण गर्नु मलाई लाग्छ धेरै मेहनतको काम हुन्छ । अभिनय गर्नु पनि मेहनतकै काम हो । तर निर्माण गर्दा सबै कुरालाई सन्तुलन मिलाएर जानु पर्नें हुन्छ । मलाई त्यो गर्नु परेन । किनभने त्यो सबै पुर्णेन्दुजीले नै सबै गरिदिनु भयो । अभिनयको कुरा गर्दा त्यसमा पनि धेरै मेहनत छ । एउटा निर्देशक जे गर्नु पर्छ त्यो सबै मैले गर्न पाएको छैन, त्यो सबै पुर्णेन्दु जीले नै गर्नु भएको छ । मलाई अभिनयमा मात्र मेहनत गर्नु परेको छ । दुइटै आफ्नो ठाँउमा राम्रै छ ।
० तपाई यो संरक्षण चलचित्र निर्माण गरिरहँदा के कस्ता अप्ठयारोहरूको सामना गर्नु पर्यो ? तपाई तराई मधेशको चेलिबेटी हुनुहुन्छ, तराई मधेशमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू रहेको छ, विभिन्न प्रकारका प्रथा र बन्देजहरू छोरी मान्छे माथी रहेको छ नि ?
— मलाई त्यस्तो प्रथाहरूको सामना गर्नु परेन । किन भने मेरो परिवारको सोच के छ भने चाहे छोरा होस या छोरी सबैलाई पढाएर अगाडी बढायो भने त्यो नै सबै भन्दा ठूलो खजाना हो । मेरो बुवाको यस्तो मानसिकता भएर मलाई समाजिक प्रथाहरूले छेक्न सकेन । तराई मधेशको धेरै गाँउहरूमा यस्तो समस्याहरू रहेको छ तर मलाई यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा त्यस्तो कुनै प्रकारको समस्याहरूको सामना गर्नु परेन ।
० तपाईले अहिलेको नेपाली चलचित्र बारे राम्ररी जानकारी हुनुहुन्छ अब नेपाली चलचित्रहरू छ त्यसमा र संरक्षण फिल्ममा तपाईले के भिन्नता पाउनु भो त ?
— नेपाली चलचित्रहरू जुन अहिले छ र यो संरक्षणमा सबभन्दा पहिले त म के भिन्न पाएको छु भने यो चलचित्रमा धेरै कास्टहरू रहेको छन् । सबै चुनिन्दा क्यारेक्टरहरू रहेको छ । यो फिल्म पाँच वटा ‘पी’ जुन पावर फुल छ त्यसलाई देखाएको हो । जस्तै पोलिटिक्स, प्रेस, पुलिस, पिपुल्स यी सबै देशको अभिन्न अङ्ग हो । त्यही भएर यो संरक्षण एउटा उदेश्य लिएको फिल्म हो त्यही भएर यो अरू चलचित्र भन्दा भिन्न लाग्छ मलाई ।
० संरक्षण फिल्म २७ गते रिलिज हुदैँन र जनताहरू हेर्नको लागि एकदमै उत्साहित छ यस्तो अवस्थामा तपाईले आम पब्लिकलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ? दर्शकलाई के भन्नु हुन्छ ?
— म दर्शकलाई यहि भन्न चाहन्छु् कि अल नेपालमा एकै साथ रिलिज हुदैछ । यो फिल्म अहिलेको राजनीति चलखेल कस्तो भइरहेको छ र यसको सोलुशन के त इत्यादी विषयमा देशको चिन्ता छ भने यो फिल्मले भरपूर्ण आन्नद दिन्छन् । सबैजनालाई म आग्रह गर्छू नजिकै सिनेमा गएर फिल्म हेरिदिनु होला । र सोसल मिडिया मार्फत हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला ।
० अन्तिममा तपाईले दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
म दर्शकलाई यो मात्रै भन्न चाहन्छु कि तपाईहरू सिनेमा गएर एकचोटी फिल्म हेरिदिनु मलाई विश्वास छ कि एक चोटी हेर्नु हुन्छ भने अर्को चोटी पनि जाने चाहनु हुन्छ । किनभने हामीले यो संरक्षण चलचित्र आम पब्लिकको माथी बनाएका छौँ । हाम्रो देशमा खाली डाक्टर इन्जिनीयरले हुदैन । अहिलेको पोलिटिक्लन सिचुएशन राम्रो छैन । त्यसको लागि हाम्रो नयाँ जेनरेशनलाई जो केही गर्न सक्छ त्यो मुदाहरूमा पनि केन्द्रित छ । त्यसको लागि तपाईहरू एक चोटी सिनेमा घरमा चलचित्र हेरिदिनु ।